भीम रावलको टिप्पणी : अब आएर राज्यले दिने तक्मामा पनि राजनीतिक भागबण्डा! « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, ५ असोज । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलले राज्यले दिने तक्मामा पनि राजनीतिक भागबण्डा गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत उनले देश र जनताप्रति थोरै भएपनि जिम्मेवार हुन र लोकलाज तथा नैतिकताको ख्याल गर्न निर्णकर्तालाई आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री, राजदूत, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय लगायतमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा दलीय भागबण्डा, अब आएर राज्यले दिने तक्मामा पनि राजनीतिक भागबण्डा! यो देश र जनताको फजिती र अधोगतिको मार्ग हो।निर्णयकर्ता हो,देश र जनताप्रति थोरै भएपनि जिम्मेवार होउ र लोकलाज तथा नैतिकताको ख्याल गर!
— Dr. Bhim Rawal (@BhimRawal179) September 20, 2021
उनले लेखेका छन्–मन्त्री, राजदूत, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय लगायतमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा दलीय भागबण्डा, अब आएर राज्यले दिने तक्मामा पनि राजनीतिक भागबण्डा! यो देश र जनताको फजिती र अधोगतिको मार्ग हो।निर्णयकर्ता हो,देश र जनताप्रति थोरै भएपनि जिम्मेवार होउ र लोकलाज तथा नैतिकताको ख्याल गर!
गण्डकी, ५ कात्तिक: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न
काठमाडौं, ५ कात्तिक । नेपालमा असर गर्ने उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली नरहे पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य
अमेरिकाले चीनसँग शीतयुद्ध गर्न चाहँदैन्ः बाइडेन
एजेन्सी, ५ कात्तिक । अमेरिकाले चीनसँग शीतयुद्व गर्न नचाहेको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले प्रष्ट पारेका